Outlook Express Tool ကို undelete ။ Outlook Express ပယ်ဖျက်အီးမေးလ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး။
DataNumen Outlook Express Undelete အဆိုပါဖြစ်ပါသည် အကောင်းဆုံး ထဲမှာပယ်ဖျက်ထားတဲ့အီးမေးလ်များကိုပြန်လည်ဆယ်တင်ရန်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ် Outlook Express။ ၎င်းသည် DBX ဖိုင်များကို scan ဖတ်ရန်နှင့်သင်၏အီးမေးလ်များကိုတတ်နိုင်သမျှဖျက်သိမ်းရန်အဆင့်မြင့်နည်းပညာများကိုအသုံးပြုသည်။
ကိုအသုံးပြုဖို့ ကျေးဇူးပြု. DataNumen Outlook Express Repair CORRUPT မှအီးမေးလ်များကိုပြန်လည်ရယူရန် Outlook Express မေးလ်ဖိုင်တွဲများ
ကိုအသုံးပြုဖို့ ကျေးဇူးပြု. DataNumen Outlook Repair CORRUPT Outlook PST ဖိုင်များမှအီးမေးလ်များနှင့်အခြားအရာများပြန်လည်ရယူရန်။
အဘယ်ကြောင့် DataNumen Outlook Express Undelete?
အထက်ဖော်ပြပါပရိုဂရမ်သည်အလွန်ကောင်းသည်ကိုသင်အသိပေးရန်မှတ်စုတစ်ခုသာငါအောင်မြင်စွာပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်ost ငါမတော်တဆခဲ့သော 3000 အီးမေးလ်များကို
အထက်ဖော်ပြပါပရိုဂရမ်သည်အလွန်ကောင်းသည်ကိုသင်အသိပေးရန်မှတ်စုတစ်ခုသာငါအောင်မြင်စွာပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်ost ငါမတော်တဆအမြဲတမ်းပယ်ဖျက်ခဲ့သောအီးမေးလ် ၃၀၀၀ ။ ငါကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်မိတ်ဆွေများကအကြံပြုဖို့တွန့်ဆုတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
SA Bias Industries လီမိတက်
ငါ Advance မတွေ့မှီငါအခြားသုံးထုတ်ကုန်ကြိုးစားခဲ့သည် Outlook Express ပြန်လည်ထူထောင်ရေး။ ပရိုဂရမ်နှစ်ခုကမက်ဆေ့ခ်ျတွေအားလုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်
ငါ Advance မတွေ့မှီငါအခြားသုံးထုတ်ကုန်ကြိုးစားခဲ့သည် Outlook Express ပြန်လည်ထူထောင်ရေး။ ပရိုဂရမ် ၂ ခုကမက်ဆေ့ခ်ျအားလုံးရှာတွေ့ခဲ့တယ်။ တတိယမှာလက်ရှိအီးမေးလ်အားလုံးကိုတောင်ရှာမတွေ့ပါ။ Advance နှင့်အတူပထမ ဦး ဆုံးကြိုးပမ်းမှု Outlook Express Recovery သည်စမ်းသပ်မှုအတွင်းရှိဖိုင်အားလုံးကိုပြသခဲ့သည်။ ငါထုတ်ကုန်ဝယ်ယူငါကြည့်ရှုသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုချက်ချင်းပြန်လည်ဆယ်တင်လို့ရခဲ့သည်။ ဤသည်စိတ်ကူးထုတ်ကုန်သည်နှင့်စျေးနှုန်းကျိန်းသေကျိုးနပ်သည်။
စကားမစပ်, ထုတ်ကုန်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ကြသည်။ အလွန်အသုံး ၀ င်သောကိရိယာများတီထွင်ခဲ့သောယောက်ျားများကိုကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်ပါ၏။
Morganite Brasil Ltda မှ
ကျွန်ုပ်တွင် 1.5GB outlool ဖိုင်နှင့်အတူပြproblemနာတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်အလွန်တင်းမာနေသော်လည်း AODR ကကျွန်ုပ်၏ပြsolနာကိုဖြေရှင်းပြီးကျွန်ုပ်၏အချက်အလက်အားလုံးကိုပြန်လည်ရယူရန်ကူညီသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တွင် 1.5GB outlool ဖိုင်နှင့်အတူပြproblemနာတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်အလွန်တင်းမာနေသော်လည်း AODR ကကျွန်ုပ်၏ပြsolနာကိုဖြေရှင်းပြီးကျွန်ုပ်၏အချက်အလက်အားလုံးကိုပြန်လည်ရယူရန်ကူညီသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Datanumenကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာအတွက်မှန်ကန်သောကိရိယာကိုရွေးချယ်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည့် .com အဖွဲ့။
အီးအက်စ်တီ။ Jeddah ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ DataNumen Outlook Express Undelete v2.2
ပယ်ဖျက်ထားသောအီးမေးလ်များကိုပြန်လည်ရယူရန် Microsoft မှပံ့ပိုးမှု Outlook Express ၅/၆ စာဖိုင်တွဲများ။
floppy disk များကဲ့သို့ပျက်စီးနေသောမီဒီယာတွင်သိမ်းဆည်းထားသော dbx ဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု၊ Zip disk များ၊ CDROM များစသဖြင့်
4GB အရွယ်ကြီးမားသည့် dbx ဖိုင်များရှိမေးလ်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ထောက်ပံ့မှု။
ဒေသခံကွန်ပျူတာတွင်ပြန်လည်ရယူရန် dbx ဖိုင်များကိုရှာဖွေရန်နှင့်ရွေးချယ်ရန်ပံ့ပိုးမှု။
Windows shell နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်သင် Windows Explorer ၏အခြေအနေ (ညာခလုတ်) menu ရှိသည့်မေးလ်ဖိုင်တွဲထဲတွင်အီးမေးလ်များကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။
Outlook Express မေးလ်ဖိုင်တွဲ၏အီးမေးလ်အားလုံးကိုသက်ဆိုင်ရာ .dbx ဖိုင်တွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Inbox.dbx ဖိုင်ထဲမှာ Inbox mail folder ထဲမှာပြထားတဲ့အီးမေးလ်များပါရှိသည် Outlook Express, အ Outbox.dbx ဖိုင်တွင် Outbox မေးလ်ဖိုင်တွဲတွင်ဖော်ပြထားသောအီးမေးလ်များပါဝင်သည်။
အီးမေးလ်အမြောက်အများကိုမတော်တဆဖျက်မိလျှင်သင်သုံးနိုင်သည် DataNumen Outlook Express Undelete မေးလ်ဖိုင်တွဲနှင့်သက်ဆိုင်သည့် dbx ဖိုင်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်၊ ပယ်ဖျက်ထားသောအီးမေးလ်များကိုပြန်လည်ရယူရန်နှင့်၎င်းတို့ကို .eml ဖိုင်များအဖြစ်သိမ်းဆည်းရန်ပြန်ပို့ရန် Outlook Express.
မေးလ်ဖိုင်တွဲနှင့်သက်ဆိုင်သည့် dbx ဖိုင်ကိုရှာပါ မင်းအဲဒီလိုမလုပ်ခဲ့ရင်
မှတ်စု: dbx ဖိုင်ဖြင့်ဖျက်ထားသောအီးမေးလ်များကိုပြန်လည်မရယူမီ DataNumen Outlook Express Undeleteကျေးဇူးပြုပြီးပိတ်ပါ Outlook Express နှင့် dbx ဖိုင်ကိုပြုပြင်ရန်အခြား application များ။
ဖျက်ထားသောအီးမေးလ်များကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းမည့် dbx ဖိုင်ကိုရွေးချယ်ပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့်, DataNumen Outlook Express Undelete xxxx သည်အကျင့်ပျက် dbx ဖိုင်၏အမည်ဖြစ်သောနေရာတွင် xxxx_recovered ရှိပြန်လည်ရယူထားသောအီးမေးလ်များအားလုံးကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ဥပမာ Inbox.dbx ဖိုင်အတွက်မူပုံမှန် output directory သည် Inbox_recovered ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်တစ်ခြား directory ကိုအသုံးပြုလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ရွေးချယ်ပါ။
ခလုတ်, DataNumen Outlook Express Undelete အလိုလိုtarရွေးချယ်ထားသော dbx ဖိုင်မှပယ်ဖျက်ထားသောစာများကိုပြန်လည်ရယူခြင်း။
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပြီးတွင်၊ ဖျက်လိုက်သည့်အီးမေးလ်များကို dbx ဖိုင်မှအောင်မြင်စွာပြန်လည်ရယူနိုင်ပါကအောက်ပါအတိုင်းစာတိုပို့စာကိုတွေ့ရလိမ့်မည် -
ယခုသင်သည်ပြန်လည်ကောင်းမွန်သည့်သတင်းစကားကိုဖွင့်နိုင်သည် Outlook Express ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ
output directory ထဲတွင် .eml ဖိုင်၏အိုင်ကွန်။ သိုမဟုတ်အီးမေးလ်များစွာကို mail ဖိုင်တွဲတစ်ခုအတွင်းသို့တင်သွင်းပါ Outlook Express.
DataNumen Outlook Express Undelete 2.2 ကိုနိုဝင်ဘာလ 23, 2013 တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
DataNumen Outlook Express Undelete ၂.၁ ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည်
ကွဲပြားသောဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် operating system များပေါ်တွင် GUI ၏လိုက်လျောညီထွေမှုတိုးတက်စေရန်။
DataNumen Outlook Express Undelete 2.0 ကိုမတ်လ ၁၈ ရက် ၂၀၁၀ တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်